Mpitantana fantsom-baovao ho an'ny indostrian'ny fandraisam-bahiny | Zeevou Channels
Ny mpitantana ny fantsona dia afaka manampy anao hampitombo ny toeram-ponenanao. Ny alina foana dia vola atsipy any anaty tatatra. Na izany aza, raha mankany amin'ny tendrony hafa, ary mahazo famandrihana vitsivitsy loatra ianao, dia miafara amin'ny famandrihana roa sosona. Ny mpitantana fantsona tsara dia afaka manampy anao hampitombo ny tanjonao (ary noho izany ny toeram-ponenanao), sady manome toky fa tsy ho be loatra ny boky.
Amin'ny fomba samihafa ny mpitantana ny fantsona. Ao amin'ny Zeevou, dia mampiasa fifandraisana mahery vaika sy tena izy ary 2-lalana miaraka amina fantsona 200 mahery izahay. Io dia ahafahanay mizara ny salan'isao sy ny fahafahanao ao anatin'ny minitra vitsy amin'ny fantsona mpiara-miasa rehetra. Raha vantany vao vita ny famandrihana dia hikoriana mivantana mankany Zeevou izy io ary hiteraka ilay malaza Dingana fanamafisana ny famandrihana 5-dingana. Io dia ahafahanao mandrindra ny fizotran'ny famandrihanao, na inona na inona fantsona nanaovana ny famandrihana.
Raha vantany vao tonga any Zeevou ny iray amin'ny famandrihana dia manavao avy hatrany ny fantsona hafa rehetra izahay mba hampahafantaran'izy ireo fa niova ny fahazoanao. Midika izany fa tsy ho voatahiry ao aminao intsony ilay singa tranonkala manokana, na koa amin'ireo tranonkala hafa nampifandraisinao.
Ity ambany ity ny lisitry ny sasany amin'ireo fantsona ampiarahinay. Izahay koa dia manome iCal fanafarana sy fanondranana asa raha toa ianao te-hampifanaraka ny fahazoanao amin'ny OTA malaza na tranokala lisitra.